कसरी एक ग्यास छत बनाउने?
कसरी एक गबल छत कसरी सही बनाउने प्रश्नको जवाफ अनुक्रमित कार्यहरूको प्रणालीमा छ। यो भन्दा एक छत विकल्प सजिलो फेला पार्न सम्भव छ। घरको उपस्थिति, यसको बल र विश्वसनीयताले सही गणना र यसको सबै तत्वहरूको सम्बन्धसँग Rafter प्रणाली निर्धारण गर्दछ।
कसरी सरल ग्यास छत बनाउने?
गुणवत्ता सूखे काठ एंटीसेप्टिक संग अप्रत्याशित र यसलाई राखन को लागि आगो retardant कोटिंग।
माउरिटको माउन्ट गर्दै।
छत को आधार मा हामी एक अख्तियार armopoyas मा बीम, जो छत को समर्थन को पुरा परिधि संग स्थित छ।
हामी यसलाई बाह्य र भित्री पक्षबाट गर्म पार्छौँ। Armopoyas र माउरोटम को बीच हामी पानी पनरोकिंग।
हामी एक मीटर वा लंगर बोल्ट को चरणहरुमा 12 या 15 मिमी को व्यास संग तय गर्छन। तपाईं यसलाई इस्पात को बने तार संग टाई गर्न सक्नुहुनेछ, जुन पहिला पर्खालमा उभिएको हुनुपर्छ। फास्टरहरू राफ्टरहरूबीच हुनुपर्छ।
जोडाहरू माउन्ट फोमसँग सुरक्षित र सुरक्षित रूपमा निश्चित छन्।
Rafters को स्थापना।
राफ्टरहरू घोडा र माउरल्याट जोड्ने तत्व हो। त्यसकारण कि पर्खालहरू गीला हुँदैनन्, तिनीहरू लामो हुन्छन्। एक मोटो र बलियो रूख स्केटको लागि उपयुक्त छ। भार को वजन बिछाने, कफ र ठाडो व्यवस्थित रैक द्वारा ग्रहण गरिन्छ।
हामी ट्रुसहरूको संग्रहको लागि दुई टेम्प्लेटहरू उत्पादन गर्दछौं। यो गर्न को लागि, rafters को आकार अनुसार अनुसार एक जोडा बोर्ड मा हामिलाई एक नाखून तेज। नि: शुल्क किनारों मध्ये प्रत्येक को समर्थन मा राखिएको छ र नाखून र एक क्रॉसबैम को उपयोग गरेर निर्धारित गरिन्छ। प्राप्त गरिएको कोण 30 डिग्री गर्न सिफारिस गरिएको छ। दोस्रो टेम्प्लेटले तपाईंलाई निर्माण कटौती गर्न मद्दत गर्नेछ।
माउरट्टलमा, हामी क्षैतिज बीमको स्थान योजना गर्दछौं र 80 सेन्टिमिटरको चरणमा छतमा राख्छौं। हामी प्रत्येक तत्व को 50 सेमी को उत्थान को कारण नाखून र पिन संग उनलाई केन्द्र मा तेज गर्छन। यदि केन्द्रीय पर्खालमा बीम बाकी, जुन5सेन्टिमिटरको पर्खाल माथि पर्खाल माथि, छत फाइल दाँतको लागि एक खाली छ।
हामी बीउ संग माउरेललाई जोगाउँछौं।
हामी Rafters चिन्ह लगाउँदछ र आवश्यक मात्रा कटौती गर्छौं। राफ्टरको माथिल्लो भागमा हामी स्केट अन्तर्गत कटौती गर्छौं, यसले रिटको साथ राफ्टरहरू जडान गर्न मद्दत गर्दछ। चूंकि रुवाइजको बीचमा पुग्न नसक्दा, यो रिज बोर्डको आधा मोटाईमा काटिएको छ। राफ्टर्सको तल्लो भागमा यसलाई टाँसनमा टाँस्नुहोस्।
हामीले काम गर्न अघि गर्नु अघि, हामी पछाडिबाट सिधा बोर्ड जोड्छौं। हामी यसलाई भवनको मध्यमा पर्खालमा लगाउँदछौं। यसले छत फ्रेम पङ्क्तिबद्ध गर्न मद्दत गर्दछ।
पहिलो गेट रफ्टरहरू, प्रारम्भिक बनाएर तिनीहरूलाई कोन्टिलभर बीमको लागि स्लॉट बनाउँछ। हामी बीउ मा रफ्टर को दोस्रो जोडी मा ठीक गर्छन र हामी उनको बीच एक रिज राखयो। हामी जमीनमा रिज को समानांतरता जाँच गर्छौं, किनारबाट बीमबाट दूरी मापन गर्दछ। अस्थायी रूपमा यो आवश्यक उचाइको बोर्ड निश्चित गर्नुहोस्। यस्तो बोर्डको मद्दतले हामी रिजको उचाईको स्तर बढाउँछौं, उनीहरूले पनि यसलाई सिंक गर्न दिँदैनन्।
रिज र पर्खालको बीचको कोण सिधा गर्नुहोस्। यसको लागि, आवश्यक छ कि rafters ठाडो बोर्ड छ, पछि निरन्तर ढलान जोडने पछि।
हामी सम्पूर्ण स्केट तय गर्छौं, र त्यसपछि हामी rafters यसलाई यसलाई खण्डमा, हरेक3एम हामी पर्खालमा बाँधेर।
हामी बाँकी राफ्टहरू स्पेसरको साथमा पर्खालको शीर्षमा मिलाउँदछौं। यो दुई वटा नाकहरूसँग निस्किएको छ, त्यसपछि स्ट्रेपिंग गर्न ढलानमा, हामी बीमको जङ्गलमा तीनवटा नाकहरू हथौडा र स्पेसरको पछाडि जगेडा गर्छौं। धेरैले प्रबलित जस्ती कुनाकारहरूबाट विशेष फास्टनर प्रयोग गर्दछ।
हामी Rafters लाई समर्थन बीम र समर्थन गर्दछ।
हामीले सेन्टिलेभर बीम काट्यौं र फन्टहरू जगेडा गर्छौं।
राफ्टरहरूको अन्त्य कुखुराको पछि लुकेको छ।
Rafters मा हामी भाप बाधा राख्दछौं र हामी नियन्त्रण गर्छौं।
Rafters बीच इन्सुलेशन पानाहरू राख्छन्।
हामी चलचित्रको साथ इन्सुलेशन बन्द गर्दछौं।
स्लेटहरू प्रयोग गर्दै, हामी वेंटिलेशन भ्याम्प बनाउँछौं।
हामी छतको मुख्य सामग्री स्थापना गर्न सुरु गर्छौँ।
काठबाट बनेको घरहरू
बेबीको बेड-डल्फिन दराजसँग
क्लासिक शैलीमा एन्टरमूम
केटाहरूको लागि बच्चाहरु बिड मिसिनहरु
सोफा, अग्रेषण गर्दै
सूर्यबाट लगगिमा पर्दा
फेंग शुईमा कोठा फूल
सिङ्क कसरी उपयोगी छ?
जिममा तालिम लिनु पहिले माथि
Yarrow - बीउ बढ्दै जान्छ
एक घरको घरको घर
दस्तुरबाट बच्चालाई के गर्ने?
शरीर बाहिर निस्कनुहोस्
बुनाई प्रविधि "फ्रीफर्म"
Zoning भान्सा र बस्ने कोठा
मल्टीवार्क मा बन्स
व्यक्तित्व - कसरि एक मजबूत व्यक्तित्व बन्न, एक व्यक्तित्व को विकास?
वाल सजावट विकल्पहरू
एक काठको घरमा बाथरूम
गुलाबी स्कर्ट - के राम्रो लाग्न को लागी राम्रो छ र कसरी ठीकसँग मिलाउन सकिन्छ?
बालहरुको लागि जडीबुटी - विकास र कर्ल को चमक को लागि उत्तम औषधीय पौधहरु
जेनिफर लरेन्स एक ठूलो आश्चर्य संग नर्टन बच्चाहरु को अस्पताल को रोगी प्रस्तुत गरे